Android Lollipop တွင် LG G3 ကို root လုပ်ပါ Androidsis
Francisco Ruiz | | Android Root ပါ, LG, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
အောက်ဖော်ပြပါ post သို့မဟုတ်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသောသုံးစွဲသူများအတွက်အလွန်လွယ်ကူစွာပေးထားသောကြောင့်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဆိုပါက၊ သင်အောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ Android Lollipop ပေါ်မှာ LG G3 ကို root လုပ်ပါ.
LG G3 နှင့်၎င်း၏မျိုးကွဲများနှင့်မော်ဒယ်များကိုနှစ်သက်သလိုပြုလုပ်နိုင်ရန်အမြန်ခွင့်ပြုချက်များကိုဖျက်သိမ်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံး Android ဖွံ့ဖြိုးမှုဖိုရမ်မှလွတ်လပ်သော developer များတီထွင်ထားသောဇာတ်ညွှန်း မှလွဲ၍ အခြားတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ တရားဝင် XDA Developers forum။ သငျသညျတပ်မက်လျှင် Android Lollipop တွင် Root LG G3 ကိုရယူပါငါနှိပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည် "ဆက်ဖတ်ပါ" ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ရှင်းပြသွားကြသည်ကတည်းက။
1 Android Lollipop တွင် Root LG G3 ရရန်လိုအပ်သည်
2 Android Lollipop ပေါ်မှာ LG G3 ကို root လုပ်နည်း
Android Lollipop တွင် Root LG G3 ရရန်လိုအပ်သည်
လိုအပ်ချက်များကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းနှင့်သင်၏ LG ဒရိုင်ဘာများပါ ၀ င်သည့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိပါ။ တရားဝင် LG ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော PC Suite ရှိပါကသင်သေချာစွာဒရိုင်ဘာများတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ထိုအရာနှင့်မသေချာလျှင်သို့မဟုတ်သင်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်မလိုချင်ပါက၊ LG link တွေကိုဒီ link ကနေတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါတယ် ပြီးတော့ executable file ကို double click လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။
သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ယာဉ်မောင်းများတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်, ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ရန်အကြံပြုလိုသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုယူမှတပ်ဆင်ဘို့။
တွေ့ဆုံရန်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် USB debugging အင်္ဂါရပ်ရှိသည် Developer settings / options မီနူးမှ စ၍၊ ဤရွေးချယ်မှုသည်အစကန ဦး အန်းဒရွိုက်ဆက်တင်များအတွင်း၌ကွယ်ဝှက်နေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် Android ဆက်တင်များ၌ပေါ်လာစေရန်၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်နှစ်ခုကိုပြီးတာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ် Android Lollipop တွင် LG G3 ကို Root လုပ်ရန် Script ကို Download လုပ်ပါ ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာ၏အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် LG-Root-Script-by-avicohh.exe ဖိုင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်လိုအပ်သောဖိုင်များကိုရယူရန်အတွက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုရွေးရမည်။ LG G3 ကို Android Lollipop ဖြင့် root လုပ်ပါ.
ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုလ်ဒါတွင် unzip လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် LG G3 ကို PC နှင့် USB ချိတ်ဆက်မှုဖွင့်ပါ, ပြီးတော့ LG Root Script.bat ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ MSDos ဖန်သားပြင်တွင် Script ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည် Android Lollipop ဖြင့် LG G3 ကိုအလိုအလျောက် Root လုပ်ရန်ပရိုဂရမ်ကိုစောင့်ပါ.
စက်ပစ္စည်းအား detect လုပ်ရန် script အတွက်ပြproblemsနာများရှိပါက၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည် Download mode သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမည်။ terminal ကို off နှင့်စတင်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုရရှိသည် ကျွန်တော် volume ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါသောတစ်ချိန်တည်းတွင် PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ.
ဤရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများနှင့်အတူ LG G3 တွင် Root ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးဖြစ်သည် သို့မဟုတ်အဖြစ်လူသိများ SuperUser ခွင့်ပြုချက်များ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာကို install သို့မဟုတ် uninstall လုပ်ရန်အပြင် terminal ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အထူးသို့မဟုတ် system applications များကို install လုပ်နိုင်ရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Android Lollipop ပေါ်မှာ LG G3 ကို root လုပ်နည်း
Cayetano စံ ဟုသူကပြောသည်
lollipop ပါသည့် lg g3 သည်တံဆိပ်အောက်တွင်ရှိသည်။ အဲဒီမှာအဲဒီမှာဖြစ်ပျက်မပါဘူး, ငါအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
norma cayetano အားပြန်ကြားပါ
ရာဖေးလ်အိန်ဂျယ်López Montilla ဟုသူကပြောသည်
Rafael အိန်ဂျယ်López Montilla ကိုပြန်ပြောပါ
Francisco က Javier Sanchez Roca ဟုသူကပြောသည်
Francisco Javier Sanchez Roca အားပြန်ပြောပါ
Keyzo gakiya ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် G3 ကို Lollipop သုံး၍ အမြစ်တွယ်ခဲ့သည်။ ငါ၌ Telcel (မက္ကဆီကို) ဗားရှင်း ၈၅၅ ရှိသည်၊ OTA မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်🙂ကျွန်ုပ်သည် Lollipop နှင့်အမြစ်ရှိပြီးဖြစ်သည်
Keyzo Gakiya အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ LG G3 Lollipop (OTA မှတစ်ဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့်) root ကိုကြိုးစားပြီးအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Android စတော့ရှိတယ်
ကျေးဇူးပြု!!! အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်တိုးတက်မည်ဟုယူဆရသည်။ တိုးတက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၅.၀ သည် garrrrrrraaaaa ဖြစ်သည်။ သင်မယုံနိုင်ဘူး၊ install မလုပ်ပါနဲ့ !!! ငါ့မှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ lg g5.0 စသည်တို့ကိုကောင်းစွာ configured လုပ်ထားတယ်၊ ဒီ3ကငါ့အတွက်အဲဒါကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ ငါနောက်တဖန် app ကို install လုပ်သူတို့ကို uninstall ပြန် install လုပ်ရတယ်မဟုတ်ပါအဘယ်သူမျှမကက c fuck ဆိုတဲ့ရဲ့ ... ဆိုလိုသည်မှာ။ သတိထားပါ၊
ကျွန်တော့်အတွက်ကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ D855 ကကျွန်တော့်ကို serial port မပေးပါဘူး၊ download mode မှာစဖွင့်လိုက်ရင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
အက်ဒွပ် eskouden ဟုသူကပြောသည်
Android 5.0.1 အတွက်မဟုတ်ဘဲ Android 5.0 အတွက်သာဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအမြစ်တွယ်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်ုပ်တွင်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုအရှိန်မြှင့်ရန်မလိုပါ။ ___ ။ ဘယ်လိုသွားခဲ့သလဲဆိုတာဆွေးနွေးပါ… ..
အက်ဒွပ် Eskouden ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့်အတွက် Android5lg g3 D955 ကိုသုံးလို့မရပါဘူး
ကျွန်တော့်မှာ LG G3 5.0 ရှိပြီးနောက်ဆုံး update ကအဲဒီ tutorial မှာအကြိမ် ၁၀၀ လောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ နောက် ၁၀၀ ကတော့ click တစ်ချက်တည်း root ပါ။ antivirus မပါဘဲ antivirus မပါပါဘူး။ …ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးနဲ့အဆုံးမှာငါရပြီ“ ပြီးပြီ!” ဒါပေမယ့်ငါမြင်သောအရာကိုကနေကျော်သွားသောလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသေးသည်, ဒီနောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏
အထူး command: ရိုက်ထည့်ပါ
-Mounting / system, ဒေတာနှင့် rootfs
-Post-installation script ကို
- စနစ်နှင့် / ဒေတာများကိုတပ်ဆင်ခြင်း
Script system သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သေးပါ၊ ၎င်းသည်“ Search device” တွင်ရှိနေသော်လည်း XDA thread တွင် installable program ကိုပိုမိုအလိုလိုသိသော GUI ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာကမိနစ် ၃၀ နီးပါးကြာအောင်ဖုန်းကို ၉၀%၊ ဖုန်းကို“ update လုပ်ခြင်း firmware” ရှိနေခြင်းကြောင့်မတုံ့ပြန်သောကြောင့်ငါဘက်ထရီကိုဖယ်လိုက်တယ်။ ငါထပ်မံဖွင့်လှစ်ပြီးပြီ။ အမြစ်ပြီးဆုံးပြီ။
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာတွေ ၊,, ငါပြောခဲ့တာကို (ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားပါ) (ကြောက်စိတ်ဖြင့်) သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်လျှင်အမြစ်တွယ်နေလျှင်၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ !!!!!!!
maykol peru သို့ပြန်သွားရန်
၎င်းသည် device ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းသည် firmware update သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်၎င်းသည် 0% သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်အဆင်ပြေသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဤအရာကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးကျွန်ုပ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီနိုင်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကန့်အသတ်မရှိတန်ဖိုးထားပါမည်။ LG G3 855 တစ်ခု၊
Jimenez ကိုကယ်တင်ပါ ဟုသူကပြောသည်
အတိအကျကျွန်ုပ်သည် Damian နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရာပေါင်းများစွာသင်ခန်းစာများနှင့်နည်းလမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သည်။
salva jimenez အားစာပြန်ပါ
Ana ဖာနန်ဒက် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Firmware Update သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်၎င်းသည် ၀% တွင်ရှိနေသည်။ ထိုအခါအမိန့် console ကိုသာအထူး command: ENTER, LEAVE ပေါ်လာလိမ့်မယ်
ထိုအရပ်မှအမြစ်ဖြစ်သည်ကိုငါမရ။ ဖြေရှင်းနည်းရှိသူတစ် ဦး ဦး ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤ Android တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါ
Ana Fernandez အားတုံ့ပြန်ပါ
ငါ့မှာ android 5.0 ရှိတယ်။ ငါ့ကို root မပေးဘူး
ငါ post ကိုအတွက်အဘယ်အရာကိုကြိုးစားပြီးပြီးသားငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
root ဆိုတာ 21a ထက်နိမ့်တဲ့ version တွေပေါ်မှာသာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။ ငါဒီနည်းလမ်းကို ၂၁ နဲ့မတိုးခင် ၂၁ ကြိမ်နဲ့ပထမဆုံး root သို့သွားသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပုံမရှိသော်လည်း root ၏အဆုံးတွင်သဲလွန်စမရှိချေ။ script update ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်။
USB ကို PTP စနစ်ပြောင်းပါ။
«မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Firmware Update သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်၎င်းသည် ၀% တွင်ရှိနေသည်။ ထိုအခါအမိန့် console ကိုသာအထူး command: ENTER, LEAVE ပေါ်လာလိမ့်မယ်
ထိုအရပ်မှအမြစ်ဖြစ်သည်ကိုငါမရ။ ဖြေရှင်းချက်ရှိသူမည်သူမဆို ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် Android အတွက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ »
ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ : C